प्रधानमन्त्रीज्यू, खोलियो त अघोषित नाकाबन्दी ? | My News Nepal
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतको गरेका केपी शर्मा ओली आप्mनो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिउ भ्रमण (चीन भ्रमण) सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन् । चीन जानु अगाडि भारतीय पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गरेका ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय सुरक्षाकर्मीको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका थिए । त्यति मात्रै होइन ओलीले नेपाल–भारतबीच भएका सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे । त्यसका लागि सबै तयारी पूरा भएको बताएका थिए ।
त्यसैले ओलीलाई चीनले धेरै महत्व दिएको छैन । ओली र कम्यनिस्ट सरकारले जति चीनको पक्षमा दाबी प्रस्तुत गरेपनि महत्वपूर्ण सम्मेलन र कार्यक्रमहरूमा बोलाएको छैन । चीनले भूकम्पको बहाना बनाएर तातोपानी नाका बन्द गरेको छ । नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । यो अघोषित नाकाबन्दी खोल्न ओलीले कसरी पहल गरे ? त्यो भने समयले नै बताउने छ ।
हुनत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण सोचेभन्दा बढी उपलब्धिपूर्ण भएको बताएका छन्। चीन जानुभन्दा अघि आफूले गरेको प्रतिवद्धताभन्दा बढी उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ उपयुक्त समयमा नेपाल आउने पनि बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसम्म रेल पुर्या्उन चीन तयार रहेको बताउँदै फिजिविलिटी अध्ययनपछि लगानीको विषय टुङ्गो लाग्ने बताए।
तयारी नपुगेका कारण पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जुलाईभित्र द्वीपक्षीय छलफलबाट पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । तातोपानी नाकाको बारेमा भने ओलीले मुख खोलेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच उर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलपूmल उद्योग स्थापना गर्नेलगायत विभिन्न एक दर्जन परियोजनामा समझदारी एवम् सम्झौता भएका छन् । a
सञ्जय श्रेष्ठ २०७६ जेष्ठ ३१ गते